Hiksôsy - Wikipedia
Fananiham-bohitra nataon' ny Hiksôsy tao Ejipta
Ny Hiksôsy dia vahoaka semita avy any Azia Afovoany izay nitsoaka noho ny fananiham-bohitra nataon' ny Indô-eorôpeana tao amin' io faritra io. Tamin' ny fiandohan' ny taonarivo faha-2 dia nangozohozo ny firaisan' i Ejipta noho ny firohotr' izy ireo tao. Niorim-poneana tao avaratra-atsinanan' ny Vinanin' i Nily izy ireo.
Nanararaotra ny fihalemen' ny fahefan' ireo faraôna tamin' ny dinastia faha-13 hatramin' ny faha-14 izy ireo mba haka an' i Ejipta Ambany. Nahay niady ara-tafika izy ireo sady nitondra soavaly sy kalesin-tsoavaly tany Ejipta. Nisy ny vanimpotoana anelanelany faharoa izay nanomboka tamin' ny taona 1781 tal. J.K. tamin' i Avarisy, izay ivon' ny herin' ny Hiksôsy, dia lasa renivohitra tamin' ny dinastia faha-15 vahiny. Nandray ny fomba amam-panaon' ny Ejipsiana ny mpanjaka hiksôsy, nivavaka tamin' ireo andriamanitra Seta sy Ra (na Re) ary naka tahaka ny fomban' ny mpanjaka ejipsiana.
Avy amin' ny teny demôtika hoe heka khasout (izay midika ara-bakiteny hoe "lehiben' ny firenena vahiny"), amin' ny teny grika taloha: Ὑκσως / Huksôs) ny teny nogasina hoe Hiksôsy.
Ny Hiksôsy dia vondrom-poko maro tany Azia Andrefana. Araka fitantaran' ny mpitantara ôfisialy tao amin' ny Empira Vaovao, izay narahin' i Manetôna (Manethon), ireo vahoaka avy any ivelany ireo, araka io anarana egiptiana io, dia tonga tany atsinanan' ny Vinanin' i Nily tamin' ny Vanimpotoana Anelanelany Faharoa. Araka io filazana io ihany, izy ireo dia nandroaka ireo mpitarika tamin' ny dinastia faha-16, izay nitoetra tao Avaris, sady nanorina ny dinastian' i Ejipta faha-15 sy faha-16 teo anelanelan' ny taojato faha-18 sy faha-16 tal. J.K. (araka ny fanisan-taona raisina), nanapaka tamin' i Ejipta Ambany sy Ejipta Afovoany nandritra mihoatra ny taonjato iray.
Izany fitantarana izany dia mampametra-panontaniana ny mpahay tantara ankehitriny. Tamin' ny vanimpotoana antsoina hoe "hiksôsy", i Avarisy dia toa renivohitry ny fanjakana egiptiana mpanao raharaham-barotra niroborobo fatratra,vokatry ny raharaham-barotra nifanaovany tamin' ny any Ampiposahana sy tamin' ny fanjakana nobianan' i Kerma, tamin' ny alalan' ny lalan' ny tandaha-biby mpitatitra any amin' ny tany efitra andrefana. Ny fisian' ny mpivarotra maro avy any Ampiposahana tao Avaris dia nahatonga fifangaroan' ny kolontsaina izay hita taratra tamin' ny fisavana ny ambanin' ny tany notarihin' i Manfred Bietak tao Tell el-Dab'a.
Ny lazan' ny mpanani-bohitra vahiny hiksôsy dia nomen' ireo mpanjaka tebàna ny fanjakan' i Avaris tamin' ny dinastia faha-18, izay nanamarina ny fandravana ny tanàna sy ny fandrobana natao azy mba hanafahana ny firenena. Izany hetsika fandalana ny tanindrazana izany dia tsy zava-baovao. Hatramin' ny fanombohan' ny fanjakana notapahin' ny faraôna, ny fahavalo dia notondroina mandrakariva ho Aziatika (na Nobiana arakaraka ny zava-mitranga), araka ny asehon' ny sary maneho ny faraôna manorotoro ny lohan' ireo fahavalo izay manana toetra ara-batana mampiavaka ny vahoaka avy any Ampiposahana izay mora fantatra, ary izany, hatramin' ny faran' ny taonarivo faha-4. Ny vato fisaka fanosorana tao Narmer dia ohatra iray malaza amin' izany.
Araka ny mahazatra dia ny enina amin' ireo mpitarika tamin' ny dinastia faha-15 no atao hoe "Hiksôsy". Ny anarana hiksôsy dia tena manakaiky ny anarana kananeana, ka manamarina ny fifamatorany amin' Ampahatsinanana taloha izany. Izany fisokafana amin' ny tontolo aziatika izany dia heverina ho vokatry ny fampidirana miandalana zava-baovao toy ny tsipìka vita amin' akora isan-karazany, ny sabatra mibilo-dela, ny soavaly sy ny kalesin-tsoavaly, ka ny fampiasan' ny Egiptiana ireto roa farany ireto dia voamarina tao amin' ny fiafaran' ny Vanimpotona anelanelany faharoa.
Ny sasany tamin' ireo andriandahy tao amin' ny dinastia faha-16 dia Hiksôsy, ny sasany Semita, ny sasany Aziatika ary ny sasany Egiptiana. Ny anaran' ny andriandahy tao amin' ny dinastia faha-15 dia fantatra ankehitriny noho ny asa sy ny zavatra goavana naorin' ny Egiptiana, sy noho ny Ægyptiaca ("Tantaran' i Egipta") nosoratan' i Manetôna, izay nampandrina an-tsoratra tamin' ny andron' i Ptômemaiôsy I.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiksôsy&oldid=1037861"
Voaova farany tamin'ny 15 Septambra 2021 amin'ny 08:35 ity pejy ity.